Bangladesh : Ezaka fanampiana noho ny rivodoza Sidr · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2008 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Shqip, English
Nandrava an’i Bengladesh ny rivodoza Sidr ny tapaky ny volana Novembra teo, ary na dia nihena be aza ny firesahan’ny fampahalalam-baovao dia mbola mitohy hatrany ny ezaka fanampiana ny traboina. Nandefa lahatsary maromaro tamin’izay niainany avy any Dhaka, Bangladesh ho fandraisany anjara hampitsaharana ny fahantrana.
Bangladesh moa no firenena fahafito be mponina indrindra manerantany, ary ny mponina ao aminy dia mandray vola latsaky ny $2 USD isan’andro ny ankamaroany. Asehon’i Shawn ao amin’ny Uncultured Project izany toejavatra izany sy ny lohahevitra hafa mikasika an’i Bangladesh.
Ao amin’ity Uncultured Project video (lahatsarin’ny tetikasan’ny tsy mahalala fomba) ity mitondra ny lohateny hoe, Voina nateraky ny rivodoza Sidr – Fanampiana ankizy miaraka amin’ny Save the Children no nandraiketany ny sarin’ny toerana tradoza sy ny fialofana anangonana ankizy anjatony, Kamboty fanindroany ny sasany amin’izy ireo. Nividy bodofotsyavy amin’ny volany manokana i Shawn ary nanome izany ho an’ireo kamboty izay noraisin’ny Save the Children an-tanana vonjimaika ny fikarakarana sy ny fampialofana azy.
Avy amin’ny Al Jazeera teny anglisy ny ankamaroan’ny lahatsary hafa mitantara ny fiantraikan’ny rivodoza Sidr toy ny fiainan’ny mpanarato taorian’ny tafiotra mahery: Tsy afa-mihaza an-drano (manjono, manarato) noho ny tsy fahampian’ny lakana na harato, sady tsy manam-bola hanamboarana ny simba na hividianana satria tsy afa-nikarama ry zareo. Ny sary hafa indray dia avy amin’ny lahatsarin’i ArKoDiP ahitana ny fiangavian’ny olona handefa fanampiana any Bangladesh hahafahan’ireo olona ireo mihary indray.
Mbola misy sary hafa ao amin'ny lahatsoratra nadika (teny anglisy)